B သှေးအကွောငျး သိကောငျးစရာ
HomeKnowledgeB သှေးအကွောငျး သိကောငျးစရာ
B သှေးမြားဟာ တဈယောကျတညျး အေးအေးဆေးဆေး နခေငျြကွသူမြား ဖွဈကွပါတယျ။ အားတဲ့အခြိနျတိုငျး အခနျးထဲမှာ တဈယောကျတညျး နရေငျး ဖုနျးတဈလုံးနဲ့ အလုပျရှုပျနတေတျပါတယျ။
သိပျမခငျတဲ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှရေ့ငျ ခပျတညျတညျနတေတျပွီး အရမျးခငျတဲ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှရေ့ငျတော့ နားညညျးအောငျ ပွောတတျတာ B သှေးတှပေါ။
လူတိုငျးကို မခငျတတျလို့ မာနကွီးတယျလို့ ထငျခံရတတျပွီး ပေါငျးကွညျ့မှ တကယျကို ရိုးသားဖွူစငျ ကွတာပါ။ မိသားစုထဲမှာပဲဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးကွားထဲမှာဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကို ပိုဂရုစိုကျ ပိုခဈြတာ လိုခငျြတတျကွပါတယျ။
အလိုလိုကျခံရရငျလညျး အရမျးပြျောတတျကွပါတယျ။ အရမျးခငျတဲ့လူတှအေပျေါ တကယျ့စိတျရငျးမပါဘဲ ခဈြစနိုးနဲ့ အနိုငျကငျြ့တတျသလို ကိုယျ့ကို အနိုငျကငျြ့ရငျလညျး အလြော့ပေးတတျပါတယျ။ ခဏခဏ စိတျကောကျတတျပီး ဘယျသူမှ ပွနျခြော့စရာမလိုပဲ အလိုလို စိတျကောကျပွသှေားတတျတာလညျး B သှေးတှပေါပဲ။
ဝမျးနညျးလှယျပီး မကျြရညျအကြ မွနျတတျပါတယျ ပြျောစရာကိစ်စ တဈခုကို အကွာကွီး မခံစားတတျပမေယျ့ ဝမျးနညျးစရာကိစ်စနဲ့ ကွုံလာပါက ပွနျတှေးလိုကျ စိတျမကောငျးဖွဈလိုကျ မကျြရညျကလြိုကျ ဖွဈနတေတျကွပါတယျ။
အရမျးကွိုကျတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျကိုပဲ ထပျခါထပျခါ နားထောငျတတျတာလညျး B သှေးတှရေဲ့ စရိုကျတဈမြိုးပါ။ စိတျဝငျစားတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုကို အခြိနျခဏလေးနဲ့ တတျမွောကျပမေယျ့ စိတျမဝငျစားတဲ့ အကွောငျးအရာဆိုပါက မညျသို့ပငျ အကြိုးရှိစကောမူ လှညျ့မကွညျ့တတျကွပါ။
အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျလာရငျတော့ အားနညျးခကျြ အနညျးငယျ ရှိတတျကွပါတယျ။ သံသယစိတျ အနညျးငယျဝငျတတျပီး ကိုယျ့ကိုယျကိုလညျး မယုံကွညျတတျကွပါဘူး။ အခဈြရေးထကျ မိသားစုအရေးကို ပိုဦးစားပေးတတျကွပါတယျ မိသားစုအတှကျ အမွဲကွိုးစားနပေီး စိတျခမျြးသာ ပြျောစခေငျြတာ B သှေးတှပေါ။
B. သှေးပိုငျရှငျမြားရဲ့အကွောငျး တစိတျတပိုငျး..
B. သှေးပိုငျရှငျတှဟော ဒေါသထှကျနတေဲ့အခြိနျဆိုရငျ မိုးမမွငျလမေမွငျပါပဲ.. သူတို့စိတျထဲမှာရှိတဲ့အတိုငျး လုပျတတျကွတယျ.. အရာဝတ်ထုတခုခုကို အာရုံရနရေငျ ဘေးပတျဝနျးကငျြကို သတိမထားကွတော့ဘူး.. သူတို့လုပျနတေဲ့အရာကိုပဲ အာရုံစိုကျလုပျနတေတျကွတယျ..
လူတယောကျကို ခဈြမိပွီဆိုရငျလညျး အသဲအသနျပါပဲ.. သူတို့ခဈြမိနတေဲ့သူ ဘယျလောကျပဲဆိုးသှမျးနပေါစေ အဲဒီဆိုးသှမျးမှုတှကေို မမွငျနိုငျကွတော့ဘူး.. လိမျပွောနတောကို သိနရေငျတောငျ ဖွညျ့ပွီးတှေးတတျကွတယျ..
လုပျစရာ ရှိတာကို သူတို့အသိဉာဏျနဲ့ စဉျးစားပွီး သှားလုပျမဲ့အခြိနျမှာ တယောကျယောကျက ကိုယျသှားလုပျမဲ့အရာကို လကျညှိုးထိုးခိုငျးလိုကျရငျ စိတျထဲမှာ သိပျမကနြေပျကွဘူး ဘုဂလနျ့တိုကျခငျြကွတယျ...
သူတို့ စာဖတျနတေဲ့အခြိနျ TV ကွညျ့နတေဲ့အခြိနျ တယောကျထဲ ဘာရယျမဟုတျ ငုတျထိုငျစဉျးစားနတေဲ့အခြိနျမှာ တယောကျယောကျက လှမျးချေါရငျ မကွိုကျကွဘူး.. မဖွဈမနေ ပွနျထူးရမယျဆိုရငျ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ အသံနဲ့ ပွနျထူးတတျကွတယျ..
သူတို့စိတျထဲမှာ သဘောမကတြဲ့ သူတှဆေို လုံးဝ စကားမပွောခငျြကွဘူး.. မဖွဈမနေ စကားပွောရမယျဆိုရငျတောငျ ဝတျကတြေနျးကပြေဲ ပွနျပွောတတျကွတယျ.. အဲဒီလူနဲ့ မပတျသတျခငျြတော့ဘူးဆိုရငျ ဟနျဆောငျပွိးတော့ကို စကားမပွောခငျြကွတော့တာ.
အရမျးသှားခငျြတဲ့ နရောတှဆေိုရငျ တယောကျထဲဖွဈနပေါစေ ရောကျအောငျသှားတတျကွတယျ.. မသှားခငျြတဲ့နရောဆိုရငျ ထမျးချေါပါ့မယျ လိုကျခဲ့လို့ပွောရငျတောငျ မလိုကျခငျြကွဘူး...
သူသှားခငျြတဲ့ နရောဆိုရငျ သှားသငျ့လား မသှားသငျ့ဘူးလားဆိုတာ မစဉျးစားတော့ဘူး ရောကျအောငျကို သှားတတျကွတယျ.... သူတို့တှဟော အရမျး ဟနျဆောငျကောငျးကွတယျ... သူတို့အရမျးခဈြတဲ့ ခငျတဲ့သူတှပေျေါမှာပဲ ဟနျဆောငျကောငျးကွတာပါ... သူတို့ မခငျတဲ့သူ သံယောဇဉျမရှိတဲ့ သူတှအေပျေါမှာတော့ ဟနျဆောငျမကောငျးကွပါဘူး...
သူတို့တှဟော အရမျးအရယျသနျကွတယျ... စိတျပြျောရှငျနတေဲ့ အခြိနျမှာဆို ပွုံးရယျခွငျးတှဟော အခြိနျတျောတျောကွာထိ ရပျတနျ့မသှားကွဘူး... စိတျမပြျောရှငျတဲ့အခါ တယောကျယောကျက ဟာသလာပွောနပေါစေ ပွုံးရယျခွငျးမရှိဘူး တညျငွိမျစှာပဲ နတေတျကွတယျ....
1. သငျဟာ အရမျးခြောတဲ့အထဲမှာ မပါပမေဲ့ သငျဟာ လူအမြား စိတျဝငျစားခွငျးခံရတဲ့အထဲမှာတော့ အမွဲပါနတေတျပါတယျ။ တနညျးပွောရရငျ သငျဟာ ခဈြစရာကောငျးသော အသှငျတမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
2. သငျဟာ မှေးထဲက ပွညျ့စုံတဲ့ သူတဈယောကျ မဟုတျပမေဲ့ သငျဟာ အရမျး ဆငျးရဲသော သူတဈယောကျ အဖွဈကိုလဲ ဘယျတော့မှ မရောကျရှိပါဘူး။
3. သငျဟာ ဉာဏျရညျမွငျ့မားမှုနဲ့ ဖွတျထိုးဉာဏျကောငျးသော သူတဈယောကျပါ။
4. သငျ့မှာ ကောငျးမှနျတဲ့ စိတျဓာတျ ကိုယျခငျြးစာမှု သူတဈပါးအား သနားတတျသော စိတျတှဟော သဈပငျရဲ့ အမွဈလို မှေးရာပါ သန်ဓတေညျ ခဲ့သော သူတဈယောကျပါ။
5. သငျဟာ အားနာရငျလဲ အရမျးအားနာတတျပမေဲ့ အားမနာမိတော့ရငျလဲ လူတဈယောကျကို ရစရာမရှိအောငျ ပွောဆိုတတျပါတယျ။
6. သငျဟာ မာနကွီးသော သူတဈယောကျ.. မဟုတျတာ ပွောခံရရငျ သေးသေးတငျ မခံနိုငျသောသူ တဈယောကျဖွဈမှနျးး ဝနျခံလိုကျပါ။
7. သငျဟာ အခဈြကွီးသော သူတဈယောကျ ခဈြသူအပျေါ သဝနျတိုမှု လှနျကဲသောသူ တဈယောကျ ဖွဈမှနျးလဲ ဝနျခံလိုကျပါ.. ထို သဝနျတိုမှုတှေ အခဈြကွီးမှုတှကွေောငျ့ဘဲ သငျဟာ အခဈြမှာ မအေးခမျြးနိုငျဘဲ ခဈြသူနဲ့ လမျးခှဲမှုတှေ မကွာခဏ ဖွဈပျေါနသေော သူတဈယောကျပါ။
9. B သှေး အခဈြ တညျမွဲခငျြပါသလားး? လကျရှိတှဲနတေဲ့ ခဈြသူကို အကနျးတဈယောကျလို မကျြစိမှိတျပီးး ခဈြလိုကျပါ။ အရာ၂ နားးလညျမှု ပေးးလိုကျပါ။ တခါတရံပျေါလာတဲ့ မိမိရဲ့ မာနတှကေို တံတှေးနဲ့အတူ မွိုခလြိုကျပါ... ဒါဆို သငျဟာ ဒီလောကမှာ အခဈြကံအကောငျးဆုံးလူ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
10. သငျ့ရဲ့ အခဈြကွီးမှု ဟာ သငျ့အတှကျ သဆေေး အဆိပျတဈခှကျလို ဖွဈနတေယျ ဆိုတာ သငျ ဒီတဈသကျ လုံးဝလုံးဝ မမပေ့ါနဲ့..
သငျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြဟာ သငျ့ရဲ့ အခဈြကွီးးမှု ပါဘဲ..
B သွေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
B သွေးများဟာ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး နေချင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အားတဲ့အချိန်တိုင်း အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း နေရင်း ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။
သိပ်မခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် ခပ်တည်တည်နေတတ်ပြီး အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင်တော့ နားညည်းအောင် ပြောတတ်တာ B သွေးတွေပါ။
လူတိုင်းကို မခင်တတ်လို့ မာနကြီးတယ်လို့ ထင်ခံရတတ်ပြီး ပေါင်းကြည့်မှ တကယ်ကို ရိုးသားဖြူစင်ကြတာပါ။ မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကြားထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ပိုဂရုစိုက် ပိုချစ်တာ လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။
အလိုလိုက်ခံရရင်လည်း အရမ်းပျော်တတ်ကြပါတယ်။ အရမ်းခင်တဲ့လူတွေအပေါ် တကယ့်စိတ်ရင်းမပါဘဲ ချစ်စနိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်တတ်သလို ကိုယ့်ကို အနိုင်ကျင့်ရင်လည်း အလျော့ပေးတတ်ပါတယ်။ ခဏခဏ စိတ်ကောက်တတ်ပီး ဘယ်သူမှ ပြန်ချော့စရာမလိုပဲ အလိုလို စိတ်ကောက်ပြေသွားတတ်တာလည်း B သွေးတွေပါပဲ။
၀မ်းနည်းလွယ်ပီး မျက်ရည်အကျ မြန်တတ်ပါတယ် ပျော်စရာကိစ္စ တစ်ခုကို အကြာကြီး မခံစားတတ်ပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာကိစ္စနဲ့ ကြုံလာပါက ပြန်တွေးလိုက် စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက် မျက်ရည်ကျလိုက် ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။
အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်တတ်တာလည်း B သွေးတွေရဲ့ စရိုက်တစ်မျိုးပါ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အချိန်ခဏလေးနဲ့ တတ်မြောက်ပေမယ့် စိတ်မ၀င်စားတဲ့ အကြောင်းအရာဆိုပါက မည်သို့ပင် အကျိုးရှိစေကာမူ လှည့်မကြည့်တတ်ကြပါ။
အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ အားနည်းချက် အနည်းငယ် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သံသယစိတ် အနည်းငယ်ဝင်တတ်ပီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မယုံကြည်တတ်ကြပါဘူး။ အချစ်ရေးထက် မိသားစုအရေးကို ပိုဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ် မိသားစုအတွက် အမြဲကြိုးစားနေပီး စိတ်ချမ်းသာ ပျော်စေချင်တာ B သွေးတွေပါ။
B. သွေးပိုင်ရှင်များရဲ့အကြောင်း တစိတ်တပိုင်း..
B. သွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် မိုးမမြင်လေမမြင်ပါပဲ.. သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်တတ်ကြတယ်.. အရာဝတ္ထုတခုခုကို အာရုံရနေရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမထားကြတော့ဘူး.. သူတို့လုပ်နေတဲ့အရာကိုပဲ အာရုံစိုက်လုပ်နေတတ်ကြတယ်..
လူတယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင်လည်း အသဲအသန်ပါပဲ.. သူတို့ချစ်မိနေတဲ့သူ ဘယ်လောက်ပဲဆိုးသွမ်းနေပါစေ အဲဒီဆိုးသွမ်းမှုတွေကို မမြင်နိုင်ကြတော့ဘူး.. လိမ်ပြောနေတာကို သိနေရင်တောင် ဖြည့်ပြီးတွေးတတ်ကြတယ်..
လုပ်စရာ ရှိတာကို သူတို့အသိဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားပြီး သွားလုပ်မဲ့အချိန်မှာ တယောက်ယောက်က ကိုယ်သွားလုပ်မဲ့အရာကို လက်ညှိုးထိုးခိုင်းလိုက်ရင် စိတ်ထဲမှာ သိပ်မကျေနပ်ကြဘူး ဘုဂလန့်တိုက်ချင်ကြတယ်...
သူတို့ စာဖတ်နေတဲ့အချိန် TV ကြည့်နေတဲ့အချိန် တယောက်ထဲ ဘာရယ်မဟုတ် ငုတ်ထိုင်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ တယောက်ယောက်က လှမ်းခေါ်ရင် မကြိုက်ကြဘူး.. မဖြစ်မနေ ပြန်ထူးရမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသံနဲ့ ပြန်ထူးတတ်ကြတယ်..
သူတို့စိတ်ထဲမှာ သဘောမကျတဲ့ သူတွေဆို လုံးဝ စကားမပြောချင်ကြဘူး.. မဖြစ်မနေ စကားပြောရမယ်ဆိုရင်တောင် ၀တ်ကျေတန်းကျေပဲ ပြန်ပြောတတ်ကြတယ်.. အဲဒီလူနဲ့ မပတ်သတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဟန်ဆောင်ပြိးတော့ကို စကားမပြောချင်ကြတော့တာ.
အရမ်းသွားချင်တဲ့ နေရာတွေဆိုရင် တယောက်ထဲဖြစ်နေပါစေ ရောက်အောင်သွားတတ်ကြတယ်.. မသွားချင်တဲ့နေရာဆိုရင် ထမ်းခေါ်ပါ့မယ် လိုက်ခဲ့လို့ပြောရင်တောင် မလိုက်ချင်ကြဘူး...
သူသွားချင်တဲ့ နေရာဆိုရင် သွားသင့်လား မသွားသင့်ဘူးလားဆိုတာ မစဉ်းစားတော့ဘူး ရောက်အောင်ကို သွားတတ်ကြတယ်.... သူတို့တွေဟာ အရမ်း ဟန်ဆောင်ကောင်းကြတယ်... သူတို့အရမ်းချစ်တဲ့ ခင်တဲ့သူတွေပေါ်မှာပဲ ဟန်ဆောင်ကောင်းကြတာပါ... သူတို့ မခင်တဲ့သူ သံယောဇဉ်မရှိတဲ့ သူတွေအပေါ်မှာတော့ ဟန်ဆောင်မကောင်းကြပါဘူး...
သူတို့တွေဟာ အရမ်းအရယ်သန်ကြတယ်... စိတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အချိန်မှာဆို ပြုံးရယ်ခြင်းတွေဟာ အချိန်တော်တော်ကြာထိ ရပ်တန့်မသွားကြဘူး... စိတ်မပျော်ရွှင်တဲ့အခါ တယောက်ယောက်က ဟာသလာပြောနေပါစေ ပြုံးရယ်ခြင်းမရှိဘူး တည်ငြိမ်စွာပဲ နေတတ်ကြတယ်....
1. သင်ဟာ အရမ်းချောတဲ့အထဲမှာ မပါပေမဲ့ သင်ဟာ လူအများ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့အထဲမှာတော့ အမြဲပါနေတတ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် သင်ဟာ ချစ်စရာကောင်းသော အသွင်တမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
2. သင်ဟာ မွေးထဲက ပြည့်စုံတဲ့ သူတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ သင်ဟာ အရမ်း ဆင်းရဲသော သူတစ်ယောက် အဖြစ်ကိုလဲ ဘယ်တော့မှ မရောက်ရှိပါဘူး။
3. သင်ဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားမှုနဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းသော သူတစ်ယောက်ပါ။
4. သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ကိုယ်ချင်းစာမှု သူတစ်ပါးအား သနားတတ်သော စိတ်တွေဟာ သစ်ပင်ရဲ့ အမြစ်လို မွေးရာပါ သန္ဓေတည် ခဲ့သော သူတစ်ယောက်ပါ။
5. သင်ဟာ အားနာရင်လဲ အရမ်းအားနာတတ်ပေမဲ့ အားမနာမိတော့ရင်လဲ လူတစ်ယောက်ကို ရစရာမရှိအောင် ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။
6. သင်ဟာ မာနကြီးသော သူတစ်ယောက်.. မဟုတ်တာ ပြောခံရရင် သေးသေးတင် မခံနိုင်သောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းး ဝန်ခံလိုက်ပါ။
7. သင်ဟာ အချစ်ကြီးသော သူတစ်ယောက် ချစ်သူအပေါ် သဝန်တိုမှု လွန်ကဲသောသူ တစ်ယောက် ဖြစ်မှန်းလဲ ဝန်ခံလိုက်ပါ.. ထို သဝန်တိုမှုတွေ အချစ်ကြီးမှုတွေကြောင့်ဘဲ သင်ဟာ အချစ်မှာ မအေးချမ်းနိုင်ဘဲ ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲမှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေသော သူတစ်ယောက်ပါ။
9. B သွေး အချစ် တည်မြဲချင်ပါသလားး? လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ချစ်သူကို အကန်းတစ်ယောက်လို မျက်စိမှိတ်ပီးး ချစ်လိုက်ပါ။ အရာ၂ နားးလည်မှု ပေးးလိုက်ပါ။ တခါတရံပေါ်လာတဲ့ မိမိရဲ့ မာနတွေကို တံတွေးနဲ့အတူ မြိုချလိုက်ပါ... ဒါဆို သင်ဟာ ဒီလောကမှာ အချစ်ကံအကောင်းဆုံးလူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
10. သင့်ရဲ့ အချစ်ကြီးမှု ဟာ သင့်အတွက် သေဆေး အဆိပ်တစ်ခွက်လို ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ သင် ဒီတစ်သက် လုံးဝလုံးဝ မမေ့ပါနဲ့..
သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်ဟာ သင့်ရဲ့ အချစ်ကြီးးမှု ပါဘဲ..